စက်ဘီးစီးတတ်ရန်နှင့် software တည်ဆောက်ခြင်း Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 27, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
အလုပ်မကြာသေးမီကတကယ့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာဖြစ်ခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါပြောတာကယောင်္ကျားလေးပြောတာပဲ။ ဒါပေမယ့်မင်းကတကယ်တော့မင်းကအရောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကုမ္ပဏီအတွင်းမှာ ဦး ဆောင်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့အဓိကအချက်အချာဖြစ်တယ်။
အချို့သောသူများသည်ရည်ရွယ်ချက်သည်အင်္ဂါရပ်များပိုမိုတည်ဆောက်ရန်သို့မဟုတ်နောက်လာမည့် web 2.0 application အသစ်များတည်ဆောက်ရန်မဟုတ်ပါဟူသောအချက်ကိုဆုံးရှုံးသွားသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာလူများအားသူတို့၏အလုပ်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာနှင့်ပိုမိုထိရောက်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ နေ့တိုင်း“ လာမယ့်ထုတ်လွှတ်မှုမှာဘာပါ ၀ င်မလဲ။
ကျွန်ုပ်သည်မေးခွန်းအားလုံးကိုဖြေဆိုရန်ခဲယဉ်းသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်၏အာရုံသည်အင်္ဂါရပ်များအားလုံးလုံးမသက်ရောက်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်၏အာရုံသည်စျေးကွက်သမားများအားသူတို့၏အလုပ်များကိုပိုမိုထိရောက်စွာနှင့်ပိုမိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အဖြေတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဖောက်သည်များအားစွမ်းအားမြှင့်တင်ပေးခြင်းသည်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သင်သည်ကြီးကြီး။ တောက်ပသောအရာများကိုအာရုံစိုက်မည်ဆိုလျှင်ဖောက်သည်များမသုံးဘဲကြီးမားပြီးတောက်ပသောအရာများရှိလိမ့်မည်။
Google တစ်ခုတည်းစာသားအကွက်နှင့်အတူစတင်တစ်ခုအင်ပါယာတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ငါဆောင်းပါးအချို့ကိုဖတ်ပါတယ် Yahoo က! တကယ်တော့သူတို့ရဲ့အသုံးဝင်မှုကို Google အတွက်ဝေဖန်လိုက်သည် စာသားအကွက်တစ်ခုထက်ပိုပြီးအသုံးဝင်အောင်လုပ်နိုင်တာကဘာလဲ။ ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့မထားပါနဲ့၊ Yahoo! သူတို့ရဲ့ applications များသို့အချို့သောစိတ်ကူး features တွေတည်ဆောက်ပါဘူး။ ငါသူတို့ရဲ့ user interface အစိတ်အပိုင်းတွေကိုလုံးဝသဘောကျတယ်၊ ငါသူတို့ application တွေကိုမသုံးတော့ဘူး။
Google သည်လူများအားစက်ဘီးစီးရန်မည်သို့ပညာပေးသည်၊ တစ်ခုတည်းသောစာသားအကွက်မှပိုမိုထိရောက်သောရှာဖွေမှုများကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ဂူးဂဲလ်သည်ရာနှင့်ချီသောလူသန်းပေါင်းများစွာကိုသူတို့၏အလုပ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။ အဲဒါကအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးလူတိုင်းကဒါကိုသုံးတာပါပဲ။ ဒါဟာတော်တော်လေးကိုမကိုက်ညီပါဘူး၊ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောပင်မစာမျက်နှာမရှိပါ။ သို့သော်အသုံးပြုသူများကိုထိထိရောက်ရောက်နှင့်ထိရောက်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်ပေးခဲ့သည်။
သင့်ကိုအသက် ၄ နှစ်သားအား ၁၅- မြန်နှုန်းမြင့်စက်ဘီးစီး။ နောက်ဘက်မြင်ကွင်းမှန်များ၊ အချက်ပြစနစ်များ၊ ရေဘူးများတပ်ဆင်ထားသည်ကိုစဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါသလား။ မင်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး 4-speed, mirrors, အချက်ပြများနှင့်ရေဘူးတစ်ခုရှိသည့် software application တစ်ခုကိုဘာကြောင့်တည်ဆောက်ချင်တာလဲ။ မလုပ်သင့်ဘူး ရည်ရွယ်ချက်မှာသူတို့ကိုစက်ဘီးစီးရန်သင်ယူရန်သူတို့ကိုအမှတ် A မှ point B အထိရောက်စေရန်ဖြစ်သည်။ Point A မှ Point B သည်ရှုပ်ထွေးမှုကြီးထွားလာသောအခါ၎င်းကို၎င်းကိုထောက်ပံ့သောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များဖြင့်စက်ဘီးတစ်စီးသင်လိုအပ်ချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူကတကယ်စီးနိုင်မှသာ!
ဆိုလိုသည်မှာလေ့ကျင့်ရေးဘီးများသည်အလွန်ကြီးသည် (ဆိုလိုသည်မှာ wizards ပုံစံဖြင့်ကြည့်သည်) အသုံးပြုသူသည်စက်ဘီးစီးနိုင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်လေ့ကျင့်ထားသောဘီးများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူသည်ဆိုင်ကယ်စီးရန်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၎င်းကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာစီးရန်လိုအပ်လျှင်၎င်းကိုဂီယာအပိုထည့်ပါ။ အသုံးပြုသူမှလမ်းဘေးပြေးရန်လိုအပ်သည့်အခါ၎င်းကို Mountain Bike နှင့်တပ်ဆင်ပါ။ အသုံးပြုသူသည်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုမှန်သမျှကိုမှန်မှန်ပစ်ချပါ။ ထိုရှည်လျားစီးနင်းများအတွက်, ရေဘူးထဲမှာပစ်။
ဂူဂဲလ်သည်တိုးတက်သောထုတ်လွှတ်မှုများနှင့်သူတို့၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုရိုးရှင်းတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ချိတ်ထားတာကိုနှစ်သက်တယ်။ သူတို့ကစာသားအကွက်တစ်ခုဖြင့်စတင်ခဲ့တယ်၊ နောက်သူတို့ကဓာတ်ပုံရှာဖွေခြင်း၊ ဘလော့ဂ်ရှာဖွေခြင်း၊ ကုဒ်ရှာဖွေခြင်း၊ ဂူဂဲလ်ပင်မစာမျက်နှာ၊ ဂူဂဲလ်မှတ်တမ်းများ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့အလုပ်ကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်နဲ့ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်စေတဲ့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ပါ။
ဒီစက်ဘီးကလူတစ်ယောက်ကိုအမှတ် A ကနေအမှတ် B အထိရောက်စေတာပါပဲ။ သူတို့သည်စက်ဘီးစီးရန်မည်သို့လေ့လာသင်ယူသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏လျှောက်လွှာတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအသစ်များကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်များကိုမည်သို့ထောက်ပံ့ရမည်ကိုစိုးရိမ်ပါ။
သတိရပါ - Google သည်ရိုးရိုးစာသားအကွက်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိအမြန်ဆုံးတိုးတက်နေသောလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများနှင့်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားစိန်ခေါ်လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့အားလုံးအတွက်ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သူတို့အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။
မတ်လ 28, 2007 မှာ 9: 33 AM
အံ့သြဖွယ်ပို့စ်။ အထူးသဖြင့် ဥဒါဟရုဏ်ကို နှစ်သက်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာများ အခက်အခဲရှိနေသည့်အရာမှာ "ဆိုင်ကယ်" အင်္ဂါရပ်များ အပိုအတွက် ဘယ်အချိန်က သင့်တော်မည်ကို တိကျစွာ အတိအကျ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့ အသုံးပြုသူများ ကျင့်သုံးလေ့ရှိသော ရှိပြီးသား အင်္ဂါရပ်များတွင် ၎င်းတို့ကို မည်ကဲ့သို့ ထည့်သွင်းရမည်ကို ကျွန်ုပ်ထင်ပါတယ်။
ဧပြီ 2, 2007 မှာ 2: 15 pm တွင်
Doug ပို့စ်ကောင်း အရမ်းမိုက်တယ်ထင်ရတဲ့ အရာတော်တော်များများက အလုပ်ပိုခက်ခဲစေတယ်။ “Why Software Sucks” သို့မဟုတ် “Dreaming in Code” စာအုပ်ကို တွေ့ဖူးပါသလား။
နှစ်ယောက်စလုံးက အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်အောင် သို့မဟုတ် အလွန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားခြင်းဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ပျက်ပြားစေပုံနှင့် အလုပ်ကို ရိုးရှင်းစွာ ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ခြင်းအကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
ဧပြီ 2, 2007 မှာ 3: 34 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Chris! ငါ ဒီသင်ခန်းစာကို မင်းကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ သင်ပေးတယ်။ မင်းဆောက်တယ်။ အတိအကျ ဆော့ဖ်ဝဲတည်ဆောက်ခြင်း၏နိယာမအပေါ် အသုံးပြုသူများအတွက် ရိုးရိုးလေးပါ ပြဿနာဖြေရှင်းရေး. မင်းရဲ့နောက်ကုမ္ပဏီနဲ့ မင်းဆိုင်မှာ ဘာတွေရှိလဲဆိုတာ ငါစောင့်မနေနိုင်တော့ဘူး၊ အကျဉ်းချုပ်!